We.com.mm - မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ လက်တွဲသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်…။
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ လက်တွဲသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်…။
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုရင် တစ်သက်လုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ချစ်ချင်ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ…။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကံမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေစက်မပါတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ရေစက်ကုန်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်…။ ချစ်သူရည်းစားထားတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေ၊ ရွယ်တူတွေနဲ့လည်း ကြုံရဖူးမှာပါ…။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ လက်တွဲတဲ့အခါမှာ အားသာချက်တွေလည်းရှိပါတယ်…။ ဒါတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ပျိုမေတို့အနေနဲ့လည်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်…။
၁. စိတ်ညစ်စရာကြုံတွေ့မှုတွေ မရှိတော့ပါဘူး…။
ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ လက်တွဲတဲ့အခါမျိုးမှာ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကြောင့် သင့်လက်တွဲဖော်မှာ တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပဲ မြင်တွေ့နေရမှာပါ…။
သူကျော်ဖြတ်လာရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ၊ အချစ်ရေးကိစ္စတွေကြောင့် သင်နဲ့တွေတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုကောင်းမွန်တဲ့အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကို သူကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ…။ သင်ရဲ့ပါးစပ်ကထုတ်ဖော်မပြောပဲနဲ့တောင် သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပြီး အလိုက်သိတတ်နေတာတွေကြောင့် သင်စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေ ကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး…။
၂. ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုမူဆက်ဆံလို့ရတယ်…။
ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့လက်တွဲမိနေတော့ ကိုယ်ကကလေးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့…။ ကိုယ်ဆိုးတာတွေ၊ နွဲ့တာတွေကို သည်းခံပြီးချစ်ပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ကို သင်ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါ…။
၃. သင်မသိသေးတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း နားလည်လာမှာပါ…။
ကိုယ်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူကို လက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားရတာဆိုတော့ သူကြုံလာခဲ့တဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေ၊ လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို သူကပိုပြီးသိနေတာကြောင့် သင်လျှောက်တဲ့လမ်းမမှားအောင်၊ သူမှားနေတဲ့အရာတွေကို ပြင်ပေးနိုင်တာတွေကြောင့် သင်အားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ…။
၄. ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတတ်မယ်…။
သင်လက်တွဲထားတဲ့သူက သင့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် သူရဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း သင်ကမိတ်ဆွေတွေလိုမျိုးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတော့မှာပါ…။ ဒီလိုအခါမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ ကိုယ်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတတ်ပြီး ကိုယ်အတွက်အားသာချက်တွေပဲဖြစ်လာစေမှာပါ…။
၅. သင့်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ Relationship ကိုရှာတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ လက်တွဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်ရည်းစားတွေလိုပဲ ရိုးသွားရင်ပြတ်သွားတဲ့ Relationship မျိုးကိုမကြုံတွေ့ရတော့ပဲ တည်ငြိမ်းပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်မျိုးဖြစ်လာမှာ အသေချာပါပဲ…။
ယောကျ်ားဖြစ်သူဘောင်ဘီအိတ်ထဲကို ကွန်ဒုံးတွေ့ပြီးနောက် ယောကျ်ားကိုသတ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
Crush က ကိုယ့်ကိုအမြန်ဆုံးသတိထားမိလာစေဖို့
Ariana Grande နဲ့Pete Davidsonတို့စုံတွဲအမှန်တကယ်ပြတ်စဲသွားကြပြီလား
ယောက်ျားလေးတော်တော်များများ မမတွေကိုပိုရင်ခုန်ပြီး ကြွေနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်း